WRITING | Wentworthonline
Ebumnuche na ebumnuche
Ụlọ akwụkwọ ETHOS
OT WE ANYỊ MỤTA
Akụkọ ihe mere eme WENTWORTH &amp; ALUMNI
IWU, Nkwupụta, Akụkọ
Arụmọrụ ụlọ akwụkwọ
Gọvanọ &amp; ntụkwasị obi
MGBE AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Banye na ụlọ akwụkwọ
Ndị mbido ọhụrụ
Ebe nrụọrụ weebụ bara uru
IHE ncheta agbachiri
Ọhụrụ na ihe omume
Na Wentworth anyị kwenyere na ụmụaka niile nwere ike ịga nke ọma wee bụrụ ndị edemede nwere obi ike, nwee ike ikwu okwu na ide ihe nke ọma ka ha wee nwee ike ịkọrọ ndị ọzọ echiche na mmetụta ha. Ebumnuche anyị bụ iji kpalie ịhụnanya ide ihe site na ikpughere akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị na -atọ ụtọ, ihe na -akpali akpali, akụrụngwa na ịgụ akwụkwọ anya nke na -ahụ maka mmepe nke ihe ọmụma na nka na ekele maka ọdịbendị asụsụ anyị bara ụba na nke dị iche iche.
Site na nnabata ruo n'afọ nke 6, anyị na -ahụ na ụmụaka na -eme nka dị mkpa nke ụda ụda, asụpe na ụtọasụsụ site na ohere ide ihe nwere nzube na itinye aka.
Iji mezuo nke a:
Ụmụaka ga -enwe ohere ide n'ụdị dị iche iche gụnyere ndetu, leta nkeonwe na nke iwu, ndekọ oge, nyocha akwụkwọ, mgbasa ozi, ibe ọchị na bọọdụ akụkọ, abụ, akụkọ, akụkọ wdg.
A na -akwado atụmatụ, idepụta na ịdegharị ihe, na mkparịta ụka ya na onye mmekọ ma ọ bụ onye nkuzi yana yana onwe ya
Ụmụaka nwere ohere imepụta iberibe ederede dịka akwụkwọ akụkọ klaasị, akwụkwọ na akụkọ onwe onye.
A na -agba ụmụaka ume ka ha gosi na -agụ ọrụ nke ha na nke ibe ha ma tụlee ngosi na nhazi.
N'oge EYFS, a na -enye ụmụaka ọrụ dị iche iche dị mma nke na -eme ọfụma dịka tweezers, brọsh, ncha ka ha nwee ike zụlite akwara ha nke ga -enyere ha aka iji obi ike dee ihe. N'ime oge mmalite afọ niile, ụmụaka nwere ike nweta ọtụtụ ihe ederede. Ụmụaka na -amalite ide ihe site na ịme akara - na -enye ihe pụtara akara ndị ha mere. Ụmụaka na -amalite ịmụ ụda ha ka izu ole na ole mbụ ha bidoro ịbanye akwụkwọ. Ozugbo ha malitere ịmụ ụda ha, a na -agba ha ume ka ha kewaa akụkụ ahụ ka ha nụ ụda ka ha na -ede. Ndị okenye na -egosipụta ide ihe na ụmụaka na -eme njikọ n'etiti okwu ọnụ na ederede.
N'oge Ọkwa Key, ụmụ akwụkwọ na -amalite ịnụ ụtọ ide ihe wee hụ uru ọ bara. Ha na-amụta ikwupụta ihe pụtara na ederede akụkọ na akụkọ na-abụghị akụkọ ifo ma na-asụpe na akara n'ụzọ ziri ezi.
N'oge Ọkwa Nkeji 2, ụmụ akwụkwọ na -azụlite nghọta na ide ihe dị mkpa maka iche echiche na mmụta yana nwee obi ụtọ n'onwe ya. Ha na -amụta isi iwu na mgbakọ nke Bekee edere wee malite inyocha ka enwere ike iji asụsụ Bekee gosipụta isi ihe n'ụzọ dị iche iche. Ha na-eji nhazi, idepụta na ndezi usoro iji meziwanye ọrụ ha yana ịkwado akwụkwọ akụkọ na akụkọ ifo ha.
Nsupe okwu, Asụsụ, Ụtọasụsụ na akara edemede
Mgbe ọ bụla o kwere omume, a na -akụziri akara edemede na mkpoputa n'ime aka nwa n'onwe ya.
N’oge mmalite ntọala afọ na igodo igodo 1 ụmụaka na -agabiga usoro mmụta mmụta phonics ka ha wee jikọta na nkewa okwu maka ịgụ na mkpoputa na ebe ọ dị mkpa, ụfọdụ ụmụaka na -aga n’ihu n’ọrụ ụda olu n’ime ọkwa nke abụọ.
Ụmụaka nọ n'ọkwa dị mkpa 1 & 2 na -eso Bekee Ihe Odide 1: Nsupe, nke Mmemme Ọmụmụ Mba Maka Bekee
A na-akụziri ụmụaka ka ha na-enyocha nsụpe onwe ha, na-eji ngwa kwesịrị ekwesị maka ọgbọ ha.
Ụmụaka nwekwara ike iji mmemme mkpoputa ICT.
Ụmụaka nọ n'ọkwa dị mkpa 1 & 2 na -eso Bekee Ihe mgbakwunye 2: Mkpụrụokwu, Ụtọasụsụ na akara edemede.
A na -agba ume okwu dị mma.
N'ime afọ ọ bụla, a na -akuzi nka ụtọasụsụ otu, na -aga n'ihu na -ewulitekwa ihe ọmụma na nka enwetala.
Mmepe nke nka Bekee abụghị ahịrị. Ụfọdụ ụmụaka ga -aghọta nkà na echiche n'ụzọ dị mfe, ndị ọzọ ga -achọ nyocha na nkwado mgbe niile.
A na -akụziri ụmụaka otu esi ejigide pensụl ma ọ bụ mkpịsị odee.
Ozugbo ụmụaka nwere ike ide ihe nke ọma, a na -agba ha ume ịzụlite ụdị doro anya doro anya nke ijikọ aka aka
A na -agba ụmụaka ume ka ha na -eji mkpịsị akwụkwọ eme ihe n'oge kwesịrị ekwesị na mmepe ha
A na -akụziri ụmụaka ka ha jiri ụdị aka aka dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche.
Njikọ bara uru:
Mpempe akwụkwọ ozi
Njedebe nke EYFS 50 Okwu ugboro ugboro dị elu iji gụọ/asụpe
Okwu 100 ugboro ugboro dị elu ịgụ/ịkọ
200 Okwu ugboro ugboro dị elu ịgụ/ịkọ
Nkọwa okwu SPAG
Afọ 3 & 4 Nkwupụta Iwu
Afọ 5 & 6 Nkwupụta Iwu
Ụlọ akwụkwọ praịmarị Wentworth (Academy) Copyright © 2021
Biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ maka nnomi akwụkwọ